Nepal Mamila | म अध्यक्ष भएर आए भने कार्यसमितिलाई मिलाएर संगठनलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनेछु: भवानी तिवारी - Nepal Mamila म अध्यक्ष भएर आए भने कार्यसमितिलाई मिलाएर संगठनलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनेछु: भवानी तिवारी - Nepal Mamila
म अध्यक्ष भएर आए भने कार्यसमितिलाई मिलाएर संगठनलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनेछु: भवानी तिवारी
नेपाल मामिलाबाट निरन्तर प्रसारण रुपमा प्रसारण हुदैँ आएको कार्यक्रम ‘खुशीका साथ एक संवाद’को तेस्रो श्रृङखलामा एनाआरएनए अस्ट्रियाका महासचिव तथा आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी भवानी तिवारीसँग एनआरएनए अस्ट्रियाको चुनावको सेरोफेरोमा रहेर कार्यक्रम प्रस्तोता तथा नेपाल मामिलाका महाप्रबन्धक खुशी लिम्बूसँग गरिएको कुराकानीको अंशः
महासचिव ज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ ।
एनआरएनए अस्ट्रिया र यहाँलाई कस्तो छ ?
एकदम ठिक छ । अब केहि राम्रो हुन्छ जस्तो छ ।
अध्यक्ष, महासचिव र कार्यसमिति बिच असहमति भन्ने सुनिएको थियो त्यो के हो ? असहमति सहमतिमा पुगिसकेको हो ?
दुःखको कुरा, सबै कुरा टुङगाएर हामी समझदारीमा अगाडि बढेउ भन्दा पनि कार्यकालभरी विभिन्न कारणले गर्दा एक भएर हामी मिलेउ र सहकार्य गर्दैछौँ भन्ने जानकारी गराउन सकिएन । केहि महिना पहिला हामीले अस्ट्रियाको विभिन्न संघ संस्था मिलेर एनआरएनए अस्ट्रियाको विवादलाई केहि हदसम्म मिलाउने कोसिस गर्नुभएको थियो । नयाँ चुनाव कमिटी तयार गरेर कमिटीहरु हस्तान्तरण गरौँ भन्ने खालका कुराहरु आयो तथापि विवादीत भयो भएन यसलाई एकदमै ठूलो पनि बनाईयो त्यसको जिम्मेवारी पनि हामीले लिनुपर्छ ।
बहालवाला महासचिव हुदैँ गर्दा कस्तो छ त ? उत्कृष्ट महासचिवको पुरस्कार पाउँदै हुनुहुन्छ ? कि हुनुहुन्न ? विशेषगरी हजुरको महासचिवको दुई वर्षे कार्यकालको अन्त्यमा यसलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
महासचिव जस्तो गरिमामय पदमा पुरुषसँग पुरुषकोपदमा चुनावमा आएर लड्दा अलिकति चुनौति भयो । अब अहिले ८३ वटा एनसिसिहरुमा चुनाव नै लडेर महिला महासचिव भएको सायद म हो कि जस्तो लाग्छ । चुनाव लडेर पुरुषहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सफल भए त्यो चाँहि अस्ट्रियावासीको माया र अस्ट्रियावासी नेपालीहरुले विगतमा भवानी तिवारीले महिला संयोजकको कार्यभार सम्हालिरहदाँ जुन इमानदारीता देखाएको थियो र उहाँहरुले पनि एकदमै ठूलो साथ दिनुभएको थियो त्यसकै प्रतिफल हो भन्न चाहान्छु । उहाँहरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु ।
विभिन्न जिम्मेवारी लिइरहँदा महासचिव भनेको एउटा संस्थाको मेरुदण्ड हो भनिरहँदाँ मैले विभिन्न आरोप प्रत्यारोप खप्नुपर्यो । तथापि हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आइसिसिका कतिपय कार्यक्रमहरुमा स्थानीय समुदायमा आइपरेका विभिन्न समस्याहरुमा लगायत यो कोभिडको महामारी र समस्यामा जे जस्तो कामहरु गर्न सकेउ त्यसमा पनि म सहभागी भए । महासचिवको रुपमा विभाजित भएतापनि आइसिसिका हरेक कार्यक्रमहरु एनआरएनए अस्ट्रिया विभाजित छ भनेर त रोकिदैँन । त्यो सबै कुराहरु अफिसियल रुपमा अगाडि बढिरहेकै हुन्छन् ।
अहिले नयाँ विधान बन्यो त्यसका लागि पनि हामिले धेरै नै पापड बेल्नु पर्यो म चाँहि समस्या र चुनौतिलाई अवसरका रपमा पनि लिन्छु ।
कता–कता सुनिन्छ नि एनआरउनए अस्ट्रियाको अध्यक्षको प्रत्यासी हुनुहुन्छ ? उठ्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइसक्नु भएको हो कस्तो छ अवस्था ?
हो ! हाम्रो विवाद भन्दा पनि अहिले आइसिसिले हरेक कुराहरु त्यो एनसिसि र आइसिसिको बाउन्डिङ कसरी हुनुपर्छ भन्ने विधानमा नतोकेको र प्रष्ट नराखेको कारणले एनसिसिहरुको धेरै विवाद बनाएको छ । हामी–हामी स्थानीय समुदाय मै हामी नेपालीहरु बाजाबाझ गर्ने गरेका छौँ । एउटा विधानको स्पष्ट धारणा नभएको कारणले हैन मिलापत्र एउटा समझदारी र सहमतिमा एउटा कमिटी बनोस भन्ने हामी सबैको इच्छा हो र त्यसमा नै हामीले पहल गरिराखेको कारणले मैले घोषणा नगरेको मेरो तर्फबाट । तथापित मैले जुलाई ७ गते सम्म आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति थियो । मैले आफ्नो आउने २०२१–२०२३ मा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छु निर्वाचन कमिटीले आधिकारीक रुपमा बाहिर सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छैन ।
निर्वाचन समितिले के गर्दै छ भन्ने कुरा तपाई महासचिवलाई मात्रै थाहा छैन कि अरु कार्यसमितिलाई पनि थाहा छैन ?
त्यो मलाई थाहा भएन सायद अध्यक्ष ज्यूसँग कुरा हुन के गरेको छ त्यो पनि पक्का थाहा भएन ।
निर्वाचन समिति त तपाईहरुले बनाएको हो । के यहाँको भनाई निर्वाचन समितिमा अलिकति अविश्वास जस्तो हो ?
आजको दिनमा एनआरएनए एउटा पक्ष विपक्ष लिएर निर्वाचन कमिटी बस्दैन होला भन्ने चाँहि मान्छेले विश्वास गर्न त गाह्रै हुन्छ । अहिलेसम्म हामीलाई चाँहि आशा छ । जुन काम गर्ने दौरानमा साना–तिना गल्ति कमजोरीहरु भएर सच्याउँदै गैराख्नु भएको छ । अहिले दुईवटा कुरा आएको छ जुन पञ्जिकृत सदस्यहरु नाम लिस्ट आउट गर्ने कुराहरु पनि चुनाव कमिटीले जुन ३० सम्मको लागि एउटा मिति फिक्स गर्नुभएको थियो त्यतिसम्म तपाईहरु दर्ता भैसक्नुहोस त्यसपछि दर्ता हुनुभएकाहरु मताधिकारबाट बञ्चित हुनुहुन्छ तपाईहरुले मताधिकार पाउनुहुन्न भन्ने थियो तर एक्कासी दोस्रो नोट नदिई निर्वाचन कमिटीले ४ गते सम्म फर्म भरेकालाई पनि पछि लिएर त्यो लिस्ट पनि आउट गर्नुभयो र भन्नुभयो केन्द्रबाट प्रमाणित गरेर आएका अस्ट्रियाका पञ्जिकृत सदस्यहरु भन्ने देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो । जब कि हाम्रो स्थानीय एनसिसिमा पञ्जिकृत सदस्यलाई प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी मेरो र अध्यक्ष ज्यूको हो ।
एनआरएनए अस्ट्रियाको सदस्य को बन्ने को नबन्ने भन्ने कुरा काठमाडौँ बाटै निर्णय गर्छ भन्ने हो ?
यो कुरा हाम्रो केन्द्रिय महासचिवसँग पहिले नै भेसकेको थियो । किनभने विधान बनाउने क्रममा हजुरहरुले विधान बनाउनु हुन्छ त्यो लागु किन हुदैँन भन्ने सवालमा यि कुरा आईसकेका थिए । चुनाव कमिटी र अध्यक्ष ज्यूले जुन पोष्ट गर्नु भएको छ त्यो केन्द्रबाट प्रमाणित भएर आएको भनेर लेख्नुभएको छ मैले त्यहाँ उहाँहरुलाई इमेल पनि गरे त्यस्तो हुनै सक्दैँन यसको जिम्मेवारी लिने म र हाम्रो अध्यक्ष ज्यू हुनुहुन्छ यसमा यदि तलमाथि परेको छ भने मैले प्रमाणित गरेको म जिम्मेवारी हुन्छु र अध्यक्ष ज्यूले गर्नुभएको उहाँ जिम्मेवारी हुनुहुन्छ । यसमा आइसिसिको कुन पदाधिकारीले यो जिम्मेवारी लिनुभयो मलाई त्यो प्रमाण चाहियो किनभने ३० गते पनि मैले एउटा पनि प्रमाणिकरण गरेको छैन लगभग ५९ जना अध्यक्ष ज्यूले गर्नुहुन्छ । अब उहाँले गर्नुभएको साथीहरु त खुशी हुनुहुन्छ भोट दिन पाइयो भन्ने होला तर अरु जुन ३० गते भन्दा पछि भर्न पाइँदैन त्यो आधिकारीक हुदैँन भनेर जो बसिरहनु भएको छ नि उहाँहरले त चित्त दुखाउनुहुन्छ अब हामीले जवाफ दिनु पर्यो त्यो कारणले मैले केन्द्रमा इमेल गरेको छु । तपाईहलाई कस्ले अस्ट्रियाको पञ्जिकृत सदस्य प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार दियो ? तपाईहरुले त अध्यक्ष र मलाई साइन गर्न लगाउनुभयो हामीले त्यसको जिम्मेवारी लिएको हो । अहिले आइसिसिको प्रमाणित गरेको सदस्यहरुले मात्रै भोटिङ अधिकार हुन्छ भनेर अस्ट्रियावासीलाई एउटा भ्रम छर्दा दुख लाग्छ । कहाँबाट के खेल भएको छ बुझ्न गाह्रो छ ।
एनआरएनए अस्ट्रियाको पञ्जिकृत सदस्य बन्ने भनेर अन्तिम मिति कहिले तोक्नु भएको थियो । जति पनि एनआरएनए अस्ट्रियाको सदस्य बन्नुभएको छ सबै आइसिसिले गरेको त होइन होला नि ? कि के हो ?
अस्ट्रियाको चुनाव कमिटिले जुन दिन सम्म पञ्जिकृत सदस्यहरुले आफ्नो दर्ता गर्ने समय दिनुभयो किनकि जुलाई २५ गते चुनाव भनेर आउट गरिसक्नु भएको थियो । चुनाव तोकेको मितिको एक महिना पहिलासम्म फर्म भरेको पञ्जिकृत सदस्य मात्रै भोटिङ अधिकार पाउने भन्ने विधानमा थियो त्यसैले हामीले त्यहीँ अनुसार जुलाई २५ सम्म चुनाव हुने भए पनि जुन २० सम्म खुलाइएको थियो अनि १० दिन थप्नुभयो त्यो मसँग सल्लाह भएको होइन । त्यसरी मिति थपेपछि चुनाव हुने मिति पनि ३१ जुलाई हुनेभयो भनेर थप्नुभयो । उहाँहरुले जानकारी गराउनुपर्ने भनेको हाम्रो चुनाव चाँहि ३१ म सर्ने भयो त्यसैले फर्म भर्न ३० सम्म मात्रैपाइने भन्नुपर्ने हो ।
यति कुरा सुन्दा लाग्यो अझै एनआरएनए अस्ट्रियामा एक अर्काप्रति विश्वास छैन ! यतिका चुनौतिको बावजुद तपाई के कारणले के आशाले अध्यक्षको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ ?
म अस्ट्रिया आएपछि भोट दिने ठाउँमा गए त्यहाँ भोट दिने महिला मैले धेरै देखे तर एउटा पनि उम्मेदवार कार्यसमिति भित्र महिला हुनुहुदैँनथ्यो त्यसपछि महिला संयोजक भएर काम गर्दा सस्थालाई सांगठनिक रुपमा कसरी मजबुद बनाउने व्यक्तिको खाँचो हो भन्ने लागेर महासचिवमा आफ्नो दाबेदार हुँ भनेर उम्मेदवारी दिएको थिए । म इमान्दारी र राम्रो नियत लिएर हिड्यो भने त्यो व्यक्तिलाई जस्तो परिस्थितिमा पनि कसरी सहज बनाउने भन्ने नेतृत्व पक्ष नै हो जस्तो लाग्छ । म यदि अध्यक्ष भएर आए भने कार्यसमितिलाई मिलाएर संगठनलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउने र समाजमा भएको भाडभैलोलाई केहि हदसम्म सहज बनाउने कोसिस मबाट हुन्छ । मलाई विश्वास छ म सक्छु ।
निर्वाचन समितिको स्वामित्व रुप नै सबैको सहमतिमा बनाउनु भएको होला नि ? कि एकलौटी नै बसेर बनाएको हो ?
शुरुदेखि नै सधैँ बहुमत र अल्पमत भन्नाले संस्था एकदमै विभाजित भएको हो । त्यहाँ पनि बहुमत र अल्पमत नै हाबी भयो ।
एनआरएनए अस्ट्रियाको अध्यक्षको प्रत्यासीको रुपमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
२०१९–२०२१ विश्वबाट महिलाहरु एकदमै अग्रसर हुनुभयो र अहिले पनि अग्रसर हुनुभएको छ उहाँहरुलाई शुभकामना दिन चाहान्छु । यो एउटा ठुलो सफलता हो । हामीहरु म्हिला हो पुरुषले दिएको पदमा चित्त नबुझाउनुहोस भन्न चाहान्छु । एनआरएनएका जसले मलाई प्रत्येक समय सहि सल्लाह–सुझाव दिनुभएको छ, अस्ट्रियावासी शुभचिन्तक मलाई माया गर्ने, मेरो आत्मविश्वास बढाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्दछु । उहाँहरुको साथ सहयोग पाँउछु भन्ने मलाई विश्वास छ । हेरौँ आगामी दिनमा के हुन्छ त्यो समयले बताउँछ ।